ESI LELEE TV NA INTANET NA KỌMPUTA - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Esi lelee TV na Intanet na kọmputa
Kọmputa bụ ngwaọrụ zuru ụwa ọnụ nke nwere ike dochie ọtụtụ ndị ọzọ: ekwentị, onye vidiyo, egwuregwu egwuregwu na, nke kachasị mkpa, TV! Iji lee TV na kọmputa gị, i nwere ike ime n'ụzọ abụọ:
tinye igwe njirimara (TV tuner) ma jikọọ ya na TV cable;
jiri Intaneti, chọta saịtị achọrọ na Intaneti na ịchọrọ mgbasa ozi achọrọ ma lelee ya.
N'isiokwu a, Achọrọ m ịnọ na nke abụọ ma gwa gị ihe gbasara ya. Ọzọkwa, ọ bụ n'efu (ịkwesighi ịzụta ihe ọ bụla ma e wezụga njikọ Ịntanetị), nke pụtara na ọ dị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ya mere ...
Isi ihe dị mkpa! 1) Iji nyochaa elu TV, ị ga-achọ njikọ Ịntanetị dị elu - ọbụlagodi 8 Mbit / s * (M gosiri na ọsọ a dabere na ahụmịhe m.) N'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-enwe afọ ojuju na obere, mana nke a ezughị ezu). Iji lelee ọsọ ịntanetị gị, jiri ndụmọdụ dị na isiokwu a:
2) Ọ bụrụ na ị na-ekiri telivishọn site na Ịntanetị, ị dị njikere maka eziokwu ahụ na mmemme ị na-ekiri "ga-egbu oge" site na 15-30 sekọnd. (ọ dịkarịa ala) Na nke a, nke a adịghị dị oké egwu, ma dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-ele football (hockey, wdg) - ọ nwere ike ịkpata nsogbu ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị agbata obi na-ekiri TV - mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta ntakịrị oge gbasara ihe mgbaru ọsọ ahụ).
Ụzọ na-ekiri telivishọn
Nzọụkwụ nọmba 1: saịtị ndị ọrụ
Ufodu TV kachasị mma nwere ebe ha. Na saịtị ndị dị otú a, ị nwere ike na-elekarị mgbasa ozi TV n'Ịntanet. Iji lee ya anya, ịkwesighi ịpị ya: dị na njikọ njikọ ahụ ma chere ruo mgbe nbudata ntanetị na mgbasa ozi malitere (ọ ga-ewe ihe dịka 10-30 sekọnd, dabere na ọsọ nke ọwa Ịntanetị).
O nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ị ga-aza. Otu n'ime ọwa TV ndị a kacha mara amara na TV, na-eleba anya na ihe kachasị mkpa ma dị egwu na-eme na Russia na Ụwa.
Na mgbakwunye na telivishọn bụ isi, eriri TV ndị ọzọ dị na saịtị: History, Sports, Mults, Culture, Bestseller, Detective, etc. Iji lee TV n'Ịntanet - pịa bọtịnụ "Live" (nke dị n'etiti etiti elu nke saịtị ahụ).
Otu n'ime ọwa TV kachasị egwu na Russia, nke malitere mgbasa ozi na 1993. Ọwa ahụ na-egosi ọtụtụ ngosi TV, akụkọ, mmemme banyere kpakpando, wdg.
Ụlọ ọrụ TV
Ozi TV telivishọn Russia. A na-akpọ TVC n'oge gara aga. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ nke Gọọmenti Moscow.
Ọ bụ otu n'ime TV ise kachasị egwu na Russia ma dị ugbu a na ebe anọ na ndepụta nke ọwa mba. Ngwongwo dị iche iche "scandalous", usoro egwuregwu na ọchị ọchị.
Onyonyo telivishọn kasị ukwuu. The TV na-egosi ọtụtụ ihe omimi ihe omume, akụkọ metụtara agha, ihe nzuzo nke eluigwe na ala nke oghere, wdg.
Ọnụ ọgụgụ nke 2: saịtị ndị na-agbasa ozi na TV
E nwere ọtụtụ ebe dị na netwọk ahụ, m ga-elekwasị anya na ihe kachasị ewu ewu ma dị mma (n'echiche m).
Otu n'ime saịtị kachasị mma nke na-anọchite anya ọtụtụ ọwa Russia maka ịlele. Ikpe maka onwe gị: ịkwesighi ịdebanye aha, a na-egosi ọwa na mma dị mma, nhazi ha dịka ọkwa na atụmatụ, mgbasa ozi na-aga n'enweghị "jerks" na frek.
Akara nseta ihuenyo nke igosi ọkwa dị n'okpuru.
Nhọrọ ọwa ...
Site n'ụzọ, m ga-agbakwụnye na ị nwere ike na-ekiri ọ bụghị naanị TV channel TV, kamakwa ọtụtụ mba ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bara uru nye ndị na-amụ asụsụ mba ọzọ (ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị hapụrụ ma ghara ịnọ n'obodo gị ugbu a).
Ọzọkwa, ọ bụghị ọrụ ọjọọ. N'ebe a, ị nwere ọtụtụ ọwa, ebe dị mma nke mgbasa ozi n'ịntanetị: ị nwere ike ịhụ ozugbo ọhụụ a gosipụtara (na okpokolo agbawa na-agbanwe online), saịtị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na video dị oke.
Otú ọ dị, ọ dị otu nkwụghachi azụ: ile igwe TV ịkwesịrị ịdebanye aha. N'aka nke ọzọ, nke a ọ bụ nnukwu nsogbu ma na-ewe oge? Ma ọ bụrụ otú ahụ, ana m akwado ka ị mara ya!
Ekpebiri m ịgbakwunye saịtị a, n'ihi na ọ bara uru nye ndị na-abụghị Ịntanetị ngwa ngwa. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọsọ Ịntanetị adịghị agafe 1 Mbit / s - mgbe ahụ ị ga-enwe ike ile TV site na saịtị a!
N'eziokwu, ndepụta ndetu na-abụghị nnukwu dị ka nke abụọ mbụ, ma ohere dị n'ebe ahụ! N'ozuzu, ana m akwado iji ya.
Ndepụta ọwa (dee ọsọ).
Ọnụ ọgụgụ nke atọ: iji ihe omume pụrụ iche
E nwere ọtụtụ mmemme (ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu narị otu narị). A na-agụnye ezi mmadụ na mkpịsị aka. Achọrọ m ibi na naanị otu n'ime ha ...
Ihe omume dị oke aka, nke nakọtara ọtụtụ narị TV! Dị ka egosipụtara na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, a na-ahazi ọwa ahụ na isiokwu dịgasị iche iche: ọha mmadụ, agụmakwụkwọ, egwuregwu, sinima, wdg. Ihe niile ị chọrọ bụ ịmepụta usoro ihe omume ahụ, họrọ isiokwu na-amasị gị ma malite mgbasa ozi nke TV a chọrọ!
RusTV Player: Ikiri TV.
Maka foto nke ihe nkiri TV a - na ọwa Ịntanetị zuru oke, foto a dị oke mma, n'enweghị ndabichi. N'ozuzu, ọ dị mma ma dị mfe iji.
N'isiokwu a ka m gwụchara. Ndị ọzọ na-eji ihe ile TV?